लेख /अन्तर्वार्ता | मोहन बिक्रम सिंह
के वर्तमान सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाँदैछ ?
कुरा नेपालको प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्रको स्थापनाका लागि स्वयं राजतन्त्र र त्यसभित्रका अन्तर्विरोध वा उनीहरूका गतिविधिले (यद्यपि नकारात्मक प्रकारले) धेरै मद्दत पुर्‍याएको छन् । दरवार हत्याकाण्ड भयो ।
निर्मला पन्त प्रकरण ः के त्यहाँ ‘शीतयुद्ध’ चलिरहेको छ ?
कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया छात्रा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको मुद्दा अब स्थानीय प्रश्नमात्र रहेको छैन, त्यो राष्ट्रिय महत्वको विषय बनेको छ । बलात्कार र हत्या भएको करिब २ महिनापुग्न लाग्दा पनि त्यो काण्डसँग सम्बन्धित अपराधीहरू पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यससित सम्बन्धित र त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो ः त्यो घटनासँग सम्बन्धित अपराधीहरूलाई योजनावद्ध प्रकारले लुकाउने प्रयत्न भइरहेको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ । त्यो प्रयत्न कोद्वारा भइरहेको छ ? त्यो एउटा गम्भीर र रहस्यमय प्रश्न बनेको छ ।
डा. गोविन्द केसीको अनसन ः के बन्दुक उल्टो पडकने छ ?
पूर्वी नेपालका एउटा निजी अस्पतालका सञ्चालकले डा. गोविन्द केसी जस्ता एक÷दुई जना नमरी यो देश उभो नलाग्ने बताएका छन्– “एक÷दुई जना मन्छे मर्न दिऊँ, केही बिग्रिदैन” (कान्तिपुर, २०७५ साउन १ गते) । सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूले पनि यस प्रकारको विचार प्रकट गर्ने गरेका छन्– “एकाध व्यक्तिको अनसनबाट सरकार झुक्दैन” । उक्त अभिव्यक्तिबाट डा. केसी वा उनको अनसन अत्यन्त ‘अवाञ्छित’ भएको र सरकारले त्यसप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको कुरा नै बुझिन्छ । तर वास्तवमा डा. केसीको अनसन व्यक्तिगत विषय होइन र त्यो देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । तर सरकारले डा. केसीको अनसनलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिई त्यससित खेलवाड गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय मानिसहरूले योसम्म विचार प्रकट गरेको पाइन्छ– देशलाई उभो लगाउनका लागि डा. केसी जस्ता मानिसहरूको निधन हुनु नै सही हुनेछ । शायद उनीहरूले यो चाहिरहेका छन् कि डा. केसीको अनसनको क्रममा नै छिट्टै मृत्यु होस् । तर यदि उनको अनसनको क्रममा नै मृत्यु भयो भने देश उभो लाग्ने कुरा ता परै छ, तर स्वयम् ओली सरकारले चुनावमा जुन अत्यधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो, त्यसमा नै ह्रास आउने छ र त्यसको जग नै कमजोर हुने छ । यो तथ्यप्रति सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न ।
कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य शोषणविहीन समाज निर्माण गर्नु हो, जसलाई साम्यवाद भनिन्छ । त्यो भन्दा पहिले पार्टी नया“ जनवादी क्रान्ति र समाजवादको लामो प्रकृयाबाट नै जान्छ । वास्तवमा यो मानव जातिको नै सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी आन्दोलन हो । त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अत्यन्त उच्च प्रकारको सङ्गठन हुनु पर्दछ । कम्युनिस्टहरु जुन महान् उद्देश्य पुरा गर्न अघि बढिरहेका छन्, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि उनीहरुभित्र उच्च प्रकारको अनुशासित, स्वस्थ र मैत्रिपूर्ण वातावरण हुनु पर्दछ ।
कमरेड कमलराज रेग्मी
–मोहन बिक्रम सिंह
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण आखिर के का लागि ?
नेपालप्रतिका भारतीय नीतिहरू गतकालमा लगातार असफल हुँदै आएका छन् । १६ बुँदे सहमतिपछि नेपालको संविधानलाई निर्माण हुन नदिने, त्यसलाई जारी हुन नदिने, शुसिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा संशोधन गर्न नाकाबन्दी लगाउने, चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्न नदिने, चुनावमा ने.का.लाई विजयी बनाउने आदि भारतीय नीतिहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारका असफलताहरूको लामो सूची छ । तर त्यो क्रममा उनीहरूको एउटा उपलब्धी (?) अवश्य रहेको छ त्यो हो ः ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउन उनीहरूलाई प्राप्त भएको सफलता । तर त्यो सफलतापछि पनि बन्दुक उल्टो पड्क्यो । प्रचण्ड ने.का.सितको गठबन्धनबाट अलग भए र उनले एमालेसित गठबन्धन जोडे । त्यसपछि भएको चुनावको परिणाम भारतीय शासक वर्गका लागि अर्को ठूलो धक्का थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभुमिमा नै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेकी छन् ।
पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई वा पार्टीका स्वीकृत लाइनका विरुद्ध भिन्न मतहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर लैजाने कि नलैजाने ? सामान्यतः यो एउटा व्यवहारिक प्रश्न हो । त्यसका साथै यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो । त्यो प्रश्नमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि नै बहस चल्दै आएको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सले स्थापना गरेको प्रथम कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको कालमा पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्ना मतभेदहरूलाई अनियन्त्रित रूपले बाहिर लैजाने वा बेग्लाबेग्लै गु्रपहरू(फ्रयाक्सन) बनाउने समेत छुट थियो । त्यो प्रचलनलाई सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूले अहिले पनि कायम राखेका छन् । तर लेनिनले त्यस प्रकारको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरे र पार्टीभित्र कडा अनुशासन कायम राख्नुपर्ने प्रणाली विकसित गरे ।